सधगुरुका महत्वपूर्ण भनाईहरु - Sakaratmak Soch
जग्गी वासुदेव सधगुरुको नामले प्रसिद्द छन् । भारतीय आध्यात्मिक गुरु तथा लेखक सधगुरुको जन्म ३ सेप्टेम्बर १९५७ मा भएको थियो । उनले स्थापना गरेको इशा फाउन्डेसनले योगा, वातारण, शिक्षा तथा विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा आएको छ । हामीले आज सधगुरुले दिएका सफल जीवनका लागी ७ सुझावहरु यहाँ साभार गरेका छौ ।
१. जीवनमा केहि कुरालाइ मार्छु भन्ने सोंच । मार्ने कुनै प्राणीलाई होइन । तिमी भित्रको कुनै कुरालाई मार, जसको तिम्रो जिन्दगीमा आवश्यकतानै छैन । जस्तो सोच कि, “म मेरो रिसलाई मार्छु” ।
२. एकै ठाउमा जरा गाडेर नबस । केहि न केहि परिवर्तन ल्याइराख ।कम्तिमा महिनाको एक पटक निर्णय गर कि, “म यो कुरा अब परिवर्तन गर्छु” । यसमा तिम्रो काम हुनसक्छ , प्राथना गर्ने बानी हुनसक्छ, पानी बचत गर्ने प्रण हुनसक्छ, कुनै पनि सकारात्मक कुरा जसले तिम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याओस् ।
३. मान्छे अजम्बरी हुदैन भन्ने कुरालाई दिमागमा राख । समयले तिमीलाई पर्खदैन । तिमीले अझ धेरै गर्न बाकी छ भनेर मृत्युले कुरेर बस्दैन । त्यसैले आजमै रमाऊ । जे गर्नु छ, आजनै सुरु गरिहाल । हरेक पललाई बिशेष बनाऊ ।
४. रिस, घृणा, इर्ष्यालाइ पर राख । रिस, घृणा, इर्ष्यालाइ पर राख्नु भनेको तिमीले अरुमाथी उपकार गर्नु वा अरुको भलो गर्नु होइन । यसो गर्नु भनेको तिमीले आफ्नो भलो गर्नु हो । जब रिस, घृणा, इर्ष्यालाइ पर राखेर बाच्छौ तब शान्ती र खुसी भेट्छौ ।
५. तिमी पहिले त्यो बच्चा जस्तै खुसी र निस्फिक्री थियौ । तर जब बढ्दै गयौ र भौतिक कुराहरुप्रति आकर्षित हुदै गयौ, तिम्रो सन्तुष्टि, खुसी, स्वतन्त्रता पनि घट्दै गयो । तिमी संग के छ होइन । तिमीभित्र के छ भन्ने कुरालाई महत्व देउ । तबमात्र तिमीले खुसी भेट्न सक्छौ ।
६. तिम्रो मानवीय ब्यबहार नै तिम्रो ज्ञानको मापक हो । प्रकृती, तिम्रो वरिपरिका व्यक्ति, तिम्रो भोजन सबै प्रति कृतज्ञ बन । आवश्यक परेका ब्यक्तीको सहयोगका लागी हात अगाडी बढाउ ।
७. आफुले खराब देखेको कुरालाइ पूर्ण अलग नराख । कुनै पनि कुरा रामो मात्र र नराम्रो मात्र भन्ने हुदैन । त्यसलाई तिमीले राम्रो देख्छौ या नराम्रो देख्छौ भने त्यो तिम्रो दृष्टिकोण हो । तिमीले जस्तो देख्छौ, त्यसको प्रतिबिम्ब तिमीभित्र बस्छ । यसको अर्थ, तिमीले जे देख्छौ त्यसको त्यसको सिर्जना तिमि आफुले गरेका हुन्छौ । हरेक कुरा तिम्रो सोंचमा भर पर्छ ।
2 thoughts on “सधगुरुका महत्वपूर्ण भनाईहरु”
Amrita magar January 25, 2020 at 4:17 am · Edit
एकदमै राम्राे कुरा हरु ल्याउनु भयाे
यस्मा कुनैन कुनै शब्दले मान्छेमा केहि हत सम्म परिवर्तन ल्याउन सकेकाे छ भन्ने अाशा राखौ .
अकबरे खुर्सानीको सेवनले घट्छ मोटोपन, आजैदेखि शुरू गर्ने कि ?
पेनकिलर प्रगोग गर्नुहुन्छ भने साबधान रहनुहोस्, खानु अगाडी र पछाडी यी कुरा याद गर्नुहोस्
यस्ता नाम भएका पुरुषले श्रीमतीलाई दबाएर राख्छन, तपाई पनि पर्नु भयो कि ?
केही बन्न जरुरी छ आफ्नो लागि मात्र होइन, यो औकात सोध्ने दुनियाको लागि पनि – मनछुने लाईनहरु